Kan Hacaaluu tuqu Oromoo miliyoona 50 tuqe. Yaa balaa isaa! – Kichuu
Kan Hacaaluu tuqu Oromoo miliyoona 50 tuqe. Yaa balaa isaa!
Kaleessa magaalaa #Finfinneetti qaamotni gurmaa’an artistii keenya #Haacaaluu Hundeessaarratti reebicha hamaa raawwachuuf yaalii taasisanii birmannaa #qeerroo muraasaatiin balaa jalaa oolee jira. Konkolaataa isaa caccabsuufis yaalii godhaniiru.
“Maaliif alaabaa Itoophiyaa dhiistee alaabaa hin beekamne qabattee waltajjirraa sirbite?” kan jedhu ka’umsa yaalii reebicha kanaa akka ta’e #Haacaaluun natti himeera! Fuuldurattis artistii kanarratti balaa cimaa geessisuuf karoorfatamee akka jiru karaa addaa addaatiin hubatameera! Haacaaluun dheengadda saba warra dhiigaa jiruuf afaan ta’ee dubbate malee waan biyya diigu jecha tokkollee hin dubbanne!
#Maddamariin kun eenyummaa ofii gataniiti moo eenyummaa ofii qabataniiti? #Itoophiyaa taanee dammaramna moo #Oromoo taanee dammaramna? #Itoophiyaa eenyummaa keenya hin simanne wajjin dammaramuun abjuu akka ta’e isiniif mirkaneessuu barbaaadna! Haacaaluun alaabaa barbaade qabatee waltajjiirratti sirbuu danda’a. Finfinnee kan Oromooti! Dhimma alaabaatiin kanneen balaa geessisuu yaalan dhuguma warra Itoophiyaaf quuqamudha moo warra faayidaan isaanii jalaa tuqame waraabeyyii guyyaati? Kunis nuuf haa qulqullaa’u!
Gara fuulduraatti yaaliin akkasii artistii keenya kanarratti kan geggeeffamu taanaan borumtaan biyya kanaa balaa guddaaf akka saaxilamu akeekkachiisa wajjin dhaamna. Filosoofii #ida’amuu jedhu kanatti fayyadamanii kanneen #eenyummaa namaarratti yakkaa geessisuuf karoorfatan kana mootummaan adaba itti gochuu qaba. Kun hin ta’u taanaan, Oromoon waan godhu beeka!
Via: Leta Kenei Aga
Dhiiraa waan manaa Ba’eef Beeku Haacee koo Dabalii jiraadhuu- Haaceen keenya hardhas seenaa dalage. – https://t.co/w3agNyqW9d pic.twitter.com/XJNwcDrUDB
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: “Haacaaluun jagna, goota akka isaa miti kan ajjeese mucaakoo”